Ugwetyiwe emva kokudlwengula umntwana wakhe, embukelisa namanyala | Ilisolezwe
Ugwetyiwe emva kokudlwengula umntwana wakhe, embukelisa namanyala
Iindaba / 14 July 2017, 4:22pm / Sithandiwe Velaphi
Inkundla yengingqi eMthatha iyigwebe iminyaka engamashumi amabini anesihlanu entolongweni indoda yaseSlovo Park eMthatha, emva kokufunyanwa inetyala lokudlwengula umntwana wayo oyintombazana oneminyaka esibhozo.
Le ndoda, neneminyaka engamashumi amane anesine, asinakuyichaza ngegama ukukhusela isidima somntwana wayo.
Ngokobungqina obuthiwe thaca phambi kwenkundla yaseMthatha, le ndoda ibihlala nale ntwazana yayo emva kokubhubha konina wexhoba. Inkundla ive ukuba bebelala ebhedini enye, ixhoba nommangalelwa.
“Ummelwane waqaphela iimpawu zokuphathwa gadalala kuba le ntwazana ibisala ukuya kowayo xa ibona utata wayo enxilile. Ngamanye amaxesha le ntwazana ibiye ibonwe imanzi ngaphantsi xa idlala nabanye abantwana,” itshilo ingxelo enikezwe enkundleni, ngokokutsho kwesithethi seGunya-Bantu lezoTshutshiso (NPA) uLuxolo Tyali.
“Xa ummelwane ezama ukuphanda le ntwazana, ixhoba liyichaze yonke imeko yodlwengulo, lisithi utata walo ebekhe alibukelise nemiboniso bhanya-bhanya yamanyala [abantu ababelana ngesondo],” utshilo uTyali.
Ummelwane wabika le nyewe emapoliseni ngenyanga yeThupha ku2015, apho le ntwazana yathi yasiwa esibhedlele nalapho oogqirha bathi bangqina ukuba ngenene udlwengulwe umntwana, kwaye oku kwenzeke izihlandlo.
Ngethuba lokuqhuba kwetyala, ummangalelwa ebesoloko ephika kodwa amangqina, kuquka nexhoba, akwazile ukuyibonisa inkundla ukuba unetyala utat’ omntwana.